Werdermann von Rüden - fiaraha-miasa ny mpisolovava
Hazo ho tsara kokoa ny rivotra Ny fiara-miasa Ao amin'ny lahatsary, lahatsoratra roa-kevitra ho ara-dalàna ny asa. Ny tendrombohitra ala tetikasa Dimy hazo ho an'ny tsirairay vaovao entona fe-potoana Ho an'ny tsirairay vaovao entona fe-potoam-piasana manome ny lalàna hentitra, miaraka amin'ny dimy vaovao hazo
Ireo dia nambolena tao an-bahoaka ala ny Berlin sy ny vanin-taona amin'ny fiaraha-miasa amin'ny bergwaldprojekt e.
Ao roa raharaha iampangana ambany daimler AG, ny LG Stuttgart, Allemagne, no nahazo ny mpanjifa amin'ny ny setroka mandatsa-dranomaso tantara ratsy manimba. Nandritra ny setroka mandatsa-dranomaso-baraka, ny lalàna mafy Werdermann von Rüden efa nahavita roa kokoa fahombiazana ho an'ny Mercedes mpanjifa.
Voalohany fanombanana iray manokana ilay mpisolovava
Avy eo, ao amin'ny fangatahana, dia hahazo ny vidiny raikitra manolotra ny fikarakarana ny fe-potoam-piasanaDia manapa-kevitra raha te-hanankina ny mpisolovava amin'ny raharaham-barotra. hoatran'ny tsy ara-dalàna ny toro-hevitra. Orinasa miasa ihany ny mpisolovava sy ny tena-miasa hetra mpanolo izay manokana eo amin'ny sehatry ny fandraisana ny fiaraha-monina (andraikitra voafetra). Ny mpisolovava fifampidinihana dia ho tanterahina ny hung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.
Mpisolovava-vonjy-ny Fampiharana ÖRAG fiarovana ara-dalàna ny fiantohana
Ianao maika mila ara-dalàna fanampiana na mitady mpahay lalàna manokana ho an'ny OlanaOhatra, satria vao avy nandray anjara tamin'ny lozam-piarakodia na ny polisy nanakana anao noho ny marokoroko ny fifamoivoizana fandikan-dalàna. Raha mila vonjy maika ny fanampiana ara-dalàna, ny fanontaniana momba ny fiarovana ara-dalàna ao amin'ny fifanarahana, na ho mahasoa ny toro-hevitra manodidina ny lohahevitra momba ny fiarovana ara-dalàna ny tombontsoa: Ny mpisolovava-vonjy-ny Fampiharana ÖRAG manome anao miaraka amin'ny mpisolovava tambajotra ao amin'ny D. (German lalàna mpisolovava Fanompoana GmbH) amin'ny soa feno entana.
Ny mpisolovava-vonjy taitra, dia hampita ny anao raha ny vonjy taitra ao Alemaina manodidina ny famantaranandro, tena-miasa mpisolovava ho an-tariby ny fakan-kevitra.
Ho an'ny ny mpanjifa, ny ÖRAG maka rechtsschutz Versicherungs-AG, mazava ho azy, ny saram-pianarana. Izany no ampiasaina ihany koa ny fametrahana ny mahay manao ny mpisolovava izay manoro hevitra anao ny baiko an-telefaonina ao amin'ny fangatahana. Ny fakan-kevitra voalohany dia tafiditra ho an'ny mpanjifa ny ÖRAG avy azo antoka ny fiarovana ara-dalàna hanakatona ny ho an'ny tsy miankina ny mpanjifa amin'ny ny fiantohana ny fandraisana anjara. Ao ny mpahay lalàna banky angona D R. afaka mitady mpahay lalàna manerana ny firenena ny mpahay lalàna, ny fikarohana, ary manana fifandraisana mivantana amin'ny mpisolovava ny safidy. Fanampiny ilaina lanjan'ny tsara ny milina, ary koa ny Zo Vaovao Tsara ny fanaovana kajy mampahafantatra anao ny mikasika ny fitsipika manan-danja ny lalana, ary milaza aminareo ny marina izay fitondran-tena mety ho lafo vidy. Miaraka amin'ny Marina ny Vaovao, dia mandray isam-bolana vaovao ny asa fanompoana ny amin'ny maha-sarobidy ny fampiharana ny toro-hevitra sy vaovao mahaliana mikasika ny lohahevitra momba ny 'fiarovana ara-dalàna".
Mialoha ny fandoavam-bola araka ny RVG: rehefa ny mpisolovava ny retainer
Amin'ny manaraka fanaovana kajy, dia afaka manao kajy ny fototry ny fomba fiasa napetraka teo ny lanjan'ny ny tokotokony mpisolovava ny saram: Ny zo mialoha araka RVG, izay mpahay lalàna, tsy maninona na dia heloka bevava fiarovana ny mpampanoa lalàna, ny manam-pahaizana momba ny fisaraham-panambadiana na ny mpisolovava
Koa tsy maninona na ny mpisolovava manatanteraka ny dingana ho an'ny ny mpanjifa, na ny tsy ara-pitsarana ny Raharaha manazava. Toy izany koa raha ny fizotry ny fanampiana ara-dalàna, dia omena, ary ilay mpampanoa lalàna dia notendren'ny fitsarana.
Izy dia afaka, na izany aza, manao fangatahana mialoha ny client, raha ny fanampiana ara-dalàna dia tsy mbola nahazo fankatoavana, ary tsy maintsy mandoa vola indray ny mialoha aorian'ny fankatoavana. Araka ny faha-sivy RVG mpisolovava mety hangataka ny"antonony mialoha" Toa manondro fa ny mpanjifa dia mety ihany no tokony hiezaka ny ampahany amin'ny ara-dalàna fandaniana mialoha ny hetra.
Raha ny tena izy, na izany aza, ny mpisolovava afaka manao kajy rehetra ny saram mandra dia nanameloka sy antenaina ho incurred, mialoha, araka ny RVG. Ny habetsaky ny mialoha ny vola Lany amin'ny dia toy izany no mety ho mitovy fa ny iray manontolo Mpisolovava ny saram. Ao ny raharaha fisaraham-panambadiana, izany dia miankina amin'ny lanjany ny foto-kevitra, izay vokatra, inter alia, avy amin'ny vola miditra aterineto na vady, ny lanjan ny fifandirana ny fahefana famatsiana onitra, ary ny fitsarana ny vokatry ny zava-drehetra.
Izany dia afaka ny ho antsoina hoe, noho izany, tsy misy fitsipika vola, tahaka ny vola lany mipoitra avy ao amin'ny olona iray ny toe-javatra.
Ny fametraham-pialàna dia tsy maintsy ho nanambara ny amin'ny lalàna, noho izany ny mpanjifa izay mahazo fahafahana mandoa ny mialoha araka ny RVG fa mbola tanteraka na, raha ilaina, mba hanendry amin'ny fotoana mahamety izany amin'ny hafa ny mpahay lalàna, ka noho izany dia mijoro am-manaraka fitsarana daty tsy misy solontena ara-dalàna.
Dia tsy maintsy manana ny rariny, araka ny filazana
Araka ny tokony ho filazana dia tsy maintsy, amin ny fitsipika, azo hamarinina, rehefa niresaka tamin'ny mpampiasaNy olon-tsotra famaranana dia ny mpiasa, dia mety ho azo tononina amin'ny filazana izany, tsy nanome ny antony. Izany dia ankoatra ny fanajana ny filazana dia ny endri-javatra manan-danja ny fotoana-ny fetra ara-dalàna ny famaranana. Ny asa dia fifanekena, ny fanalan-ny fiarovana ny asa, dia iharan'ny ny in-lalàna-antsoina hoe ny antony mahatonga ny fanalan-tsy maintsy misy. Ny asa fifandraisana foto-kevitra ny famaranana ny fiarovana asa, raha ny orinasa mampiasa mihoatra ny folo ny mpiasa sy ny asa fifandraisana nandritra ny fe-potoana enim-bolana, fara fahakeliny, ny lisitra. Ny mpiasa fa tsy antony handroahana, ny mpiasa dia mety hametraka fitoriana nandritra ny Fanambarana ny invalidity ny famaranana. Ao amin'ny manokana, maro ny mpiasa no tsy mahafantatra fa afaka manavaka amin'ny fanajana ny famaranana ny fifanarahana momba ny asa. Na izany aza, dia tsy izany no nitranga, ary ny zavatra asa lalàna. Ka ny fanontaniana dia, inona no sahaza filazana amin'ny rehetra. Izany, amin ny fitsipika, mba ho avahana amin'ny miavaka famaranana sy ny fanapahan-kevitra ny fifandraisana miasa. Izany dia mety ho nitady ny mpiasa na ny mpampiasa Araka ny tokony ho filazana tsy maintsy tafiditra ao ny azo atao filazana ny fe-potoana ary tao koa, an-tsoratra. Mpiasa izay hamarana araka ny tokony ho izy, tsy misy antony ny hanova, raha ny mpampiasa dia tsy maintsy manome ny antony izay manamarina izany dingana. Araka izany, ny mpampiasa dia mety hamarana ny mpiasa afa-tsy avy amin'ny asa, fitondran-tena na ny antony manokana, araka ny tokony ho izy. Ny filazana famaranana dia tsy maintsy ho voasariky ny afa-tsy ao amin'ny soratra, fa koa ny mpiasa. Amin ny fitsipika, ny olon-tsotra famaranana ny mpampiasa na ny mpiasa dia mety ho vita. Rehefa tonga ny fanilihana ny fepetra araka ny tokony ho filazana famaranana, na izany aza, ny famaranana ny asa ny fifanarahana avy amin'ny mpampiasa amin'ny fifantohana. Amin'ny toe-javatra isan-karazany, mety ho izay ny olon-tsotra famaranana, manome ny mpiasa dia ho voaaro indrindra. Ireto sokajy manaraka ireto ny olona handray soa avy toy ny fiarovana amin'ny fandroahana: Ny famaranana ny fiarovana ny lalàna dia mihatra ihany amin'ny orinasa mihoatra ny folo ny mpiasa ary raha ny asa fifandraisana farafahakeliny enina Volana. Ankoatra ny manokana fandroahana ny fiarovana ho an'ny mpiasa ao amin'ny toe-javatra antsoina hoe olon-tsotra famaranana dia voahilika raha ny azo ampiharina varotra iombonana fifanarahana mandrara. Ny mpampiasa, izay te-hamarana ny mpiasa araka ny tokony ho izy, ary dia toy izany no foto-kevitra isan-karazany ny famerana sy ny tsy matetika fa toy izany famaranana ny iray efa misy asa fifandraisana, dia tsy mora. Ho an'ny olon-tsotra famaranana ny asa fiarovana lalàna dia manome ny telo antony mahatonga izany. Iray amin'ireo antony ireo ho famaranana dia ny fandroahana Noho izany antony izany, ny fanafoanana noho ny aretina, na ny fisotroan-toaka. Ny fitondran-tena mifandraika amin'ny famaranana matetika dia mitaky ny fampitandremana.
Mba ahitana ny fitondran-tena mifandraika amin'ny famaranana ny antony toy izany fandikan-dalàna, ary ny fandavana ny asa na ny fanitsakitsahana ny manan-kery tsy fifaninanana io.
Fanampiny mety ny fanalan-ny fandidiana dia misy fepetra famaranana. Toy izany ny hetsika dia ampahany na ny manontolo hetsika nakatona, dia miankina, ny mpampiasa dia mitondra ny lohateny hoe ny hetsika famaranana. Mialoha ny fahombiazan'ny izany famaranana, tsy maintsy, na izany aza, dia maka toerana eo amin'ny ara-tsosialy fifantenana eo amin'ny mitovy amin'ny mpiasa ao anatin'ny orinasa.
Raha ny mpampiasa dia tsy maintsy, amin ny fitsipika, manome vaovao momba ilay antony izay nahatonga anao, ny mpiasa, ny filazana ny hoe, izany dia tsy ny raharaha ny mpiasa rehetra ny raharaha.
Mpiasa tsara ny fepetra hafa fa izy ireo dia tokony hahafantatra ny mampihatra ny zavatra miasa. Iza no nanapa-kevitra ny hiala tamin'ny Asa, tokony hanangona ny vaovao sy, raha ilaina, ny toro-hevitra manam-pahaizana manokana ao amin'ny lalàna mafy ho an'ny asa ny lalàna. Ny mpiasa dia afaka mampitsahatra ny asa fifandraisana amin'ny fotoana rehetra, tsy nanome ny antony, sy ny teo aloha ny mpampiasa dia tsy maintsy milaza noho izany, inona no nahatonga anao hanao izany dingana. Ao amin'ny iray Taorian'ny famaranana, tsy maintsy, mazava ho azy, ny azo ampiharina ny vanim-potoana ny filazana ho mihazona ny vokatra azo avy § BGB, raha tsy ny asa ny fifanarahana misy fepetra samihafa. Ao amin'ny fanarahana ny fotoana fetra tsotra fandroahana tsy misy filazana amin'ny ampahany ny mpiasa noho izany dia mora foana ny azo atao.
Alemaina asa lalàna mampiavaka ny, noho izany, eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa, rehefa tonga ny antony famaranana.
Raha ny mpampiasa dia tsy maintsy mitanisa ny antony, izany dia tsy marina ho an'ny mpiasa izay manana fifehezan-faranana.
Mpisolovava ny karama, ny vola sy ny karama manomboka
Mpisolovava tsy miaina amin'ny Tanana ny vava
ny karama dia mijanona mandrakariva ny manomboka ny karama Farany
fa ny azo antoka Mazava ho azy
ny olon-drehetra dia manomboka kely.
Feno, Fomba Feno Ny Endriky Ny
Eto amin'ity pejy ity ianao dia hianatra ny zavatra rehetra momba ny herin ny mpampanoa lalàna sy ny toe-javatra manokana. Afa-tsy, ianao afaka foana ny
Ny zava-drehetra dia mazava ho azy maimaim-poana
Ry mpitsidika, eto amin'ity pejy ity dia hanome anao ny soso-kevitra ihany koa ho toy ny iombonana sy ny lamina natao manodidina ny loha-hevitraIreto misy zavatra manodidina ny herin ny mpampanoa lalàna, ho an'ny fikarakarana, ara-dalàna sy ny raharaha ara-bola ho tatitra ho anao. Misy mazava ho azy fa misy ohatra sy ny rijan-izay tokony ho ampiasaina ao amin'ny herin ny mpampanoa lalàna, dia mety na tsia. Satria misy maro nanao tsy mitovy, samy hafa kely ny fitsipika, misy koa ny Maro ny fitsipika izay tsy maintsy nanaraka. Ny sasany amin'izy ireo dia, raha tsy misy ny taratasy fanamarinana mba ho mahomby, ny hafa voamarina mila ho afaka mba ho ampiasaina amin'ny fomba mahomby. Ny zavatra tena manan-danja amin'ny fahefana efa nanangona ny manaraka ity pejy ao amin'ny mazava, ary fakan-tahaka. Mba hahazoana ny herin 'ny mpisolovava marina olana, dia zava-dehibe ny mahafantatra izay ny herin' ny mpisolovava.
Ara-dalàna ny herin ny mpampanoa lalàna, ny solontena, ary, ankoatra ny zavatra hafa, amin'ny § ff.
Mahomby solontena dia mitaky fa ny solontenan'ny miasa amin 'ny anaran' ny Tena sy ao anatin'ny ny ny herin ny sarin (§ Abs. Izany toe-javatra izany, § ny alemana an-trano fehezan-dalàna dia manan-danja. Eto izany dia, mutatis mutandis, fa ny fahefana feno ny fanomezam-Pahefana na ny fahatelo dia nanambara."Antoko fahatelo"ao amin'ny heviny ity dia ny Olona izay solontena dia maka toerana. Ankoatra izany, ny andininy faharoa dia milaza fa feno ny endriny dia tsy ilaina, fa ny Ara-dalàna ny raharaham-barotra dia tena tapa-kevitra. Mandritra izany fotoana izany dia tokony ho nilaza fa tsy avy amin'ny andinin-tsoratra roa § ny alemana an-trano fehezan-dalàna maningana. Ity pejy ity efaha amin'ny isam-tena amin'ny faritra voamarina ara-dalàna, tsy ara-drariny solontena. Izany dia mifototra amin'ny ny herin 'ny mpisolovava' ny solontenan ny voalohany. Tsy toy izany herin ny mpampanoa lalàna, ary ianao dia ho amin'ny fahanterana na ny loza incapacitated, ny fitsarana no mamaritra ara-dalàna ny solontenan'ny. Mifanohitra amin'ny miely patrana fiheverana fa izany no andraikitrareo ray aman-dreny mpiara-miasa, na ny ankizy, ny fitsarana mba hamaritana ny Olona iray mba ho ara-dalàna ny solontenan'ny. Mba tsy ho olon-kafa"voavonjy", dia tokony hiezaka ny ho toy izany koa amin'ny fomba ara-potoana mba mety fahefana. Izao no fahefana, ny anarana feno mpamono olona tao fa ny olona matoky ny misolo tena ahy, amin'ny lafiny rehetra, Ireto avy amiko amin'ny maha-tale ao.
Izany ihany koa no be dia be ny fitokisana
Ny herin ny mpampanoa lalàna dia namoaka mba hisorohana ny baiko nomen'ny fitsarana fikarakarana ary mbola manan-kery ihany koa, raha toa aho ka tokony, toy ny lehibe ao ny fananganana ny raharaham-barotra tsy afaka ny ho tonga. Ny faharetana hatramin 'ny herin' ny mpampanoa lalàna manan-kery ka mbola ny fahefana Olona, ny zavatra ary ny Lefitry ny asa ao amin'ny tany am-Boalohany ny tatitra. Voalaza matetika ny hoe ao amin'ny rijan-ny herin ny mpampanoa lalàna:"ny fampanoavana dia amin' ny anarako ny fanambarana.".
Raha ny marina kendrena dia ampiasaina ho, ny famolavolana dia mamitaka, satria ny Solombavambahoaka dia foana ny Fanambarana ny sitrapony.
Izany koa asa na hanohitra azy. Ny Solombavambahoaka mba tsy hanao fanambarana ny fikasana fa tsy ny tombontsoa tsara indrindra. Noho izany, ny fanehoana dia ny mba hahazoana manavaka avy amin'ny tsotra ny Iraka. Ny irak'andriamanitra dia, raha ny tena izy, afa-tsy ny Fanambarana. Nahoana no ny mpitondra hafatry ny mpandraharaha, ary avy eo dia tsy marina ihany, fa ny solontenan'ny. Azonao atao ihany koa ny mba Iraka izay raha ny marina dia afaka manome afa-tsy ny fanazavana anao nanao, fa tsy afaka mahita mialoha ny zavatra hiseho amin'ny ho avy, ianao tsy misy intsony ny raharaham-barotra, mitranga. Noho izany ny irak'andriamanitra dia tsy afaka maneho hevitra amin'ny toe-javatra izay mbola tsy nahita ny marina teo. Ho setrin 'izany zava-misy izany dia midika fa tokony hijery ny Olona na ireo olona ny herin' ny mpisolovava anie tena tsara. Raha toa ka mbola manana ny tahotra fa ny solontenan'ny dia hafa noho ny tianao, dia afaka mampiasa ny fanaraha-maso ny mpandraharaha fa taratasim-bola ny solontenan'ny Fahefana, sy ny fanapahan-kevitra tsy tapaka. Ny fanaraha-maso ny mpiasa dia tokony ho tsy miandany Olona.
Ny mpisolovava na notary dia tsy afaka hahalala afa-tsy ny foto-kevitra, kanefa ihany koa lavitra ampy ho azy ireo mba hanapa-kevitra tsy miangatra.
De fanaraha-maso ny fahefana olona ny tranga ratsy indrindra, ny solontenan'ny Fahefana ny herin ny mpisolovava hiala sy, Raha ilaina, ara-dalàna ny dingana ho an'ny onitra mba hanombohana.
(Na dia eo aza ny herin ny mpampanoa lalàna, ny fitsarana dia afaka manana ny fikarakarana ara-pitsarana.
Ao amin'ity fizarana ity ianao dia afaka miala ny"mangataka"fa ny Fahefana olona iray no ampiasaina ho toy ny"fanohanana ny olona".) Bsp. Tokony na dia teo aza izany, ny fanampiana ara-dalàna ho ilaina izany, miangavy anao aho mba order ny herin ny anarana feno mpamono olona toy ny mpikarakara. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny maimaim-poana feno nanao ankoatra izany, ny ambaratonga ambony ny filaminana, fa tsy misy diso rijan, sy proxy ao amin'ny alalan'ny herin'ny tenany ny mpisolo vava. Iray amin'ireo zava-dehibe indrindra herin ny fotoana tokony ho azo antoka ny mpampanoa lalàna dia mila bebe kokoa (miakatra) ny olona ny mahafantatra ny tenany teo ambony taona, ny tsara eo anatrehan'ny manam-pahefana sy ny fitsarana. Izany dia tokony foana ary amin'ny fikarakarana lehibe araka ny lalàna amin'izao fotoana izao dia nanangana. Mariho, na izany aza: Ny santionany nomena maneho ny lalàna amin'izao fotoana izao. Ny Fanovana dia tsy mbola eo imasony, fa mety hatao eo ambanin'ny ny toe-javatra, ao ny raharaha ny olona ny lalàna. Noho izany dia tokony hanamarina fa ny fiarovana ny ainy, isaky ny herin ny mpampanoa lalàna dia ho amin'ny daty, satria miezaka isika ny hitandrina ny iombonana ho amin'ny daty, fa tsy noho ny toe-javatra rehetra.
Bola ho an'ny mpampanoa lalàna ao amin'ny-ny lalàna Vienna-landstraße vidim-bola tsy misy Schufa avy amin'ny tsy miankina
ary efa mandray karama efa an'arivony
amin'ny alalan'ny tsy Miankina ny fiovana sy ny tsy fananana asa faktiora dia manokatra fotsiny ny vola lany amin'izao fotoana izao mifandray amiko sy fandrahonana ny fanakatonana mandefamiampy aho hanokatra ny mpisolovava ny saram eo amin'ny habetsaky ny. satria aho hivarotra ny tenanao be ao an-tranoko na ny zara-tany. ny vola miditra avy amin'ny tsenan'ny asa mifanaraka eo ho eo sy ny fidiram-bola fanampiny ankoatra ny asa izay tsy amin'ny fomba ofisialy fa ny fialam-Boly ao amin'ny faritra ny Mendrika sy ny sakafo.
ka hiteny aho nipetraka tao saika niteraka trano
dia tokony ho roan-jato" Noho izany dia mety tsy handeha ny fisiany ary raha tsy mba efa nanandrana zavatra rehetra. tsy izaho no te-manelingelina na iza na iza amin'ny Toe-javatra ity Isaorako anao be dia be ho an'ny rehetra nanandrana ny hanampy sy ny fanampian'ny lt.
Real estate ho sale any Soisa: ImmoScout
Mividy ny fananana dia dingana lehibe izay mitondra miaraka aminy ny sasany fandrikaNoho izany, na iza na iza no mikasa ny hividy iray fianakaviana an-trano na ny manodidina tokony hiala, izany fanapahan-kevitra izany mba mieritreritra ny alalan ny, ary tsy avy amin'ny gut fihetseham-po. Indrindra fa ny fianakaviana izay mila be dia be ny toerana sy ny efi-trano maro, dia matetika misafidy ny hividy ny trano.
Afaka eo anelanelan'ny roa na laharana trano na ny trano tafasaraka tanteraka ny manapa-kevitra.
Vidiny mora kokoa ny mety ho indraindray mba hividy ny an-trano ny tenany, satria ny vola lany amin'ny fanorenana sy tetika ny tany dia mizara eo maro tompony. Koa noho ny Foibe toerana misy ao amin'ny tanàna, Iray amin'ireo fepetra manan-danja indrindra ao amin'ny fananana fikarohana dia hita ho an'ny mpivady na ny tokan-tena dia ny toerana misy ny trano, na ny trano. Noho izany, dia soso-kevitra fa alohan'ny mividy trano na ny trano, ny manodidina ny trano mba handinika. Araka ny teny filamatra ny tsirairay sy ny rehetra estate agent ny toerana misy ny zavatra efa mitondra fitarihana manan-danja momba ny lanjan'ny fananana. Ohatrinona ny fananana dia afaka manam-bola aho fa amin'ny rehetra.
Ireo na ny mitovitovy fanontaniana tokony mpividy sy handinika tsara ny rafitra ara-bola, mba hividy fananana manokana.
Ankoatra ny isam-bolana ny tahan'ny ho tombontsoa, ary na inona na inona Amortization ny antoka dia tokony ho ny isam-bolana ny fikojakojana ny vola lany ho an'ny trano vaovao ao ny tsy hohadinoina.
Koa ny mety hampitombo ny crédit zanabola tsy maintsy raisina anaty kajikajy amin'ny vidin'ny kajy. Ny fitsipika Ankapobeny dia tsy mihoatra ny iray ampahatelon'ny ny ankohonany tanteraka ny vola miditra dia tokony ho ampiasaina ho an'ny famatsiam-bola an-trano na ny trano.
Izany vokatra ao amin'ny fangatahana ny mpanjifa
Receivables fananan'ny fampitahorana miseho avy amin'ny fivarotana ny vokatra na ny tolotra avy amin'ny mpanjifa, tsy mandray karama fa mbolaFitantanana ny receivables mora foana amin'ny aterineto faktiora fandaharana mpanjifa. Varotra receivables (FLL) dia azo jerena ao amin'ny kaonty milaza ny tatitra fikambanana amin'ny fanajana ny antoko fahatelo, toy ny mpanjifa.
Dia fanafohezana ny teny hoe ny teny hoe"filazana LL"
Ny filazana rehefa mipoitra ny asa fanompoana efa nataony ny tompon-trosa (mpivarotra), ny fiheverana ny tsy mbola nandoa ny mpitrosa (mpividy) - ao ny ara-dalàna tranga io, ny fandoavam-bola - fa mbola. Ny mahazatra milaza ny volavolan-dalàna amin'ny fandoavam-bola. Ny fampisehoana ny tompon-trosa avy hatrany dia omena ny mpitrosa ho an'ny Manohitra ny fahefana dia, na izany aza, ny fe-potoana fandoavam-bola marina, ohatra, dia efatra ambin'ny folo andro. Ny orinasa ny birao fanaka XXL nivarotra vaovao Latabatra seza ho an'ny, eo amin'ny faktiora ny sampan-draharaha Jahn Lindemann. Amin'ity tranga ity, ny birao fanaka, XXL nanome ny fampisehoana (Fanaterana ny Latabatra, seza), fa tsy mahazo manohitra ny zava-bitany (fandoavam-bola amin'ny fivarotana vidiny). Ny birao fanaka XXL afaka hisambotra ny faktiora vola ao amin'ny taratasy mizana, noho izany, toy ny filazana. Ny sampan-draharaha mandoa ny volavolan-dalàna mivantana amin'ny vola misoratra anarana ao amin'ny Bar, dia ny manohitra ny fampisehoana efa tamin'ny fotoana ny zava-bitany. Receivables avy amin'ny fiterahana sy ny asa ao an-alemà fifandanjana taratasy fanasokajiana araka ny § HGB, eo amin'ny fananany side (fampiharana ny vola) eo ambany amin'izao fotoana izao ny toe-bola sy ny eo ambany zavatra 'ny varotra receivables sy ny fananany'. Ny birao fanaka XXL nivarotra efatra Latabatra seza ho an'ny, ny sampan-draharaha Jahn Lindemann. Ny fandoavam-bola amin'ny kaonty Ny famoahana an-tsoratra dia toy izao manaraka izao: Ny fahafahana Misafidy dia handoa ny faktiora ao anatin'ny andro fandoavam-bola amin'ny fe-potoana. Ankehitriny, ny famoahana an-tsoratra dia toy izao manaraka izao: rehefa tapitra Ny Hetra taona rehetra varotra receivables tsy maintsy ho fanombanana. Izany dia atao araka ny antsoina hoe carte fitsipika ireto sokajy manaraka ireto: Ao ny raharaha ny ireo receivables dia andrasana ho feno fandraisana ny fandoavam-bola. Tsara ny milaza fa tsy maintsy ekena, noho izany, ny fitambaran'ny gross be (par sarobidy). Izany no atao ohatra: ao ny raharaha ny fiarovana ny hampidina ny vidiny na ny vidin'ny fitsipika.
Ao ny raharaha ny malemy receivables, ny fandoavam-bola amin'ny faran'ny taona dia tsy azo antoka.
Ny mpitrosa dia mety ho, ohatra, dia insolvent na tsy mandoa ny vola na dia miverimberina ny fampahatsiahivana. Ireo receivables matetika no nandefa ny tantara samihafa"malemy trosa", mba hahazo tsara kokoa indray mitopy maso mba manana. Amin'ny faran'ny taona, ny tompon-trosa dia manao famintinana ny mety ho toerana misy anao, ohatra ny.
Izany ny tarehiny ny milaza, dia azony atao ny manoratra eny amin'izao fotoana izao.
Toy ny output sanda mety ho, na izany aza, ekena ihany ny harato vola. Dia azo ny mihevitra fa tamin 'ny faran' ny taona, eo amin'ny raharaha iray milaza fa tsy mandray karama, dia heverina ho toy ny ratsy trosa.
Ho toy ny ohatra, ny tsy fampiharana ny lalàna mety ho antsoina hoe.
Ratsy ny trosa dia afaka ny ho tanteraka ny mpanoratra eny. Ao amin'ny sehatry ny varotra hetra fanitsiana dia afaka ihany koa ho nangataka ny VAT niverina avy any amin'ny biraon'ny hetra. Miaraka amin'ny mpanjifa valopy, ny tahan'ny eo ny varotra sy ny eo ho eo ny kaonty vola raisina lisitra ny kajy. Izany famantarana ny manome zava-dehibe hevi-baovao momba ny fomba be dia be ny renivohitra dia mifatotra ao receivables. Tanjona ny orinasa dia ny mihazona ny receivables (sy ny mifandray boky mifatotra-ny renivohitra) ho ambany araka izay azo atao. Mba hampihenana ny mpanjifa ny fikirakirana ny fotoana, Ireo orinasa isan-karazany dia midika misy, toy ny, ohatra, ny fanomezana ny fihenam-bidy na ny fandoavam-bola mba.
Mpisolovava amin'ny lalàna manokana mpiasa
Ny mpisolo vava mahay mpiasa ao Alemaina ny fanjakana,-ekena ny asany amin'ny fanofanana fe-potoana telo taonaNy fanofanana ahitana ny Asa rehetra takiana ao amin'ny lalàna mafy.
Mandra, ofisialy professional anaram-boninahitra ny mpampanoa lalàna ao amin'ny-ny lalàna vady.
Ny fianarana asa dia ao amin'ny lalàna momba ny ny fanabeazana sy ny fanofanana arak'asa ho an'ny ara-dalàna ny mpanampy, notary ny mpitan-tsoratra, ny mpisolo vava sy ny notary ny mpitan-tsoratra, ary Patent paralegals no nifehy. Ny fanofanana ny fotoana azo hahena amin'ny tokony ho izy ny fanabeazana fototra sy ny fampisehoana tsara ny asa an-tsekoly.
Manokana ny fanabeazana na ny matihanina fototra dia tsy ny fepetra takiana mialohan'ny ahafahana mahazo ny fiofanana arak'asa, matetika ny mpanelanelana amin'ny tontolo-salantsalany fanabeazana sy ny fiofanana dia nanome ny mari-pahaizana na diplaoma sekoly ambony.
Ny fanofanana fifanarahana dia nifarana eo ny mpisolovava sy ny trainee, ny efi-trano mahay ny mpisolovava ao amin'ny register ny fanofanana arak'asa fifandraisana voasoratra ara-panjakana. Ny fanofanana tambin-dia nifehy ao § ny fampianarana arak'asa sy fiofanana asa. Ny isam-paritra ny efi-trano dia afaka mamaritra ho an'ny fanofanana ny vola fanampiana ho an'ny fara fahakeliny, ny tahan'ny. Ao amin'ny distrika ao amin'ny efi-trano ny mpisolovava ao Munich dia manan-kery hatramin'ny.
Ny volana janoary taona ny soso-kevitra manaraka ireto: Ny fanofanana ahitana ny Asa rehetra takiana ao amin'ny lalàna mafy.
Izany dia ahitana firaketana ny fitantanana, ny mpanjifa fandraisana sy ny antso an-telefaonina, re-fandraisana anjara, ny fanoratana ny taratasy avy dictation na tsy miankina (filazana, ny antony, Handroaka, filings Fitoriana), ny fanaraha-Maso ny daty, ny kajy ny fotoana fetra (antso, Fanitsiana), fitantanam-bola sy ny vola rafitra fitantanana, Fitarihana ny fanendrena kalandrie, ny Fanomanana fivoriana mpanjifa sy foreclosures (repossessions, ny fanaka, ny fampiharana ny lalàna), sy ny Fandaminana ary ny fitantanana ny raharaham-barotra fitsangatsanganana. Eo amin'ny laharana list ny apprenticeships fifanarahana Vaovao any Alemaina, ny vehivavy dia fanofanana ny taloha länder, amin'ny laharana efatra, folo, ary tao ny vaovao länder (incl. Berlin) amin'ny toerana roa ankoatry ny asa any ny mpahay lalàna ny birao, ohatra, ny asa-trosa famoriam-bola sampan-draharaha, ny fanamarinana ny fampiasam-bolan'ny orinasa, ary tamin'ny Mahnabteilungen ny mail-order-trano, ny sampan-Draharahan'ny store rojo vy, ary koa ny raharaha momba ny banky, tahiry banky sy fiantohana ny orinasa izay azo atao. telo Taorian'ny roa taona ny fanofanana olona afaka hiandrandra ny fampivoarana ny ara-dalàna-pahaizana manokana, notary manam-pahaizana manokana, notary mpanampy notary manamboninahitra na ny notary, mpanara-maso, misy ny fahasamihafana eo amin'ny faritany. Ny havany ny asany ny lalàna mafy mpanampy any Aotrisy.
Iraisam-pirenena Fahazoan-dalana mamily
Novambra momba ny lalana dia fifamoivoizana (BGBl
Iraisam-pirenena mitondra fiara ny fahazoan-dalana dia ny tahirin-kevitra navoakan'ny-dalana, ny fitaterana ny manampahefana na ny fiara fikambanana iray amin'ireo firenena noho ny fanjakana ny fanjakana ny fifanarahanaIzy no tokony hamela ny polisy ny firenena hafa, ny fanapahan-kevitra na ny vahiny mpamily manana ny fahazoan-dalana hitondra fiara, izay dia noho ny amin'izao fotoana izao, fiara ilaina. Ny Vienne Fifanarahana momba ny lalana mifehy ny fifamoivoizana ao amin'ny Fizarana faha-IV (mpamily ny maotera fiara) ao amin'ny andininy faha-iraika amby efa-polo (Mpamily ny fahazoan-dalana) roa, ny fampirantiana Iraisam-pirenena mpamily ny fahazoan-dalana. Any alemaina, dia ny iray amin'ireo nanao sonia Firenena io fifanarahana io. Izany dia, nandritra izany fotoana izany, na izany aza, mampihatra bebe kokoa na tsy lany andro, satria ny ankamaroan'ny ny nanatevin-daharana Milaza ireo nanasonia ny vondrona EOROPEANA ary dia toy izany, ny tsirairay-pirenena mpamily ny fahazoan-dàlana dia efa ao amin'ny vondrona EOROPEANA. Mifanindran-dàlana, dia misy faharoa fifanarahana, ny"Geneva Fifanarahana momba ny lalana dia fifamoivoizana"(. Izany dia ny Firenena ao Amerika, ary koa ny Afrikana sy Aziatika firenena ireo ny ankamaroan ny fotoana.
Noho izany, ireo vondrona roa ny Firenena izay mamokatra ny hafa"Iraisam-pirenena ny fiara ny fahazoan-dàlana"sy ny manaiky, fa tsy ny tsirairay"Iraisam-pirenena ny fiara ny fahazoan-dàlana"ho an'ny hafa ny vondrona misy.
Ho an'ny mpihazona ny fiara ny fahazoan-dalana avy any amin'ny Repoblika federalin'i Alemaina, dia toy izany no ohatra tsy azo atao ny mahazo ny ara-dalàna ao Etazonia nanaiky Iraisam-pirenena mpamily ny fahazoan-dàlana. Ny Iraisam-pirenena mpamily ny fahazoan-dalana araka ny"Ny Vienne Fivoriambe"dia nanaiky mifandray amin'ny manan-kery EU fahazoan-dalana hitondra fiara eo an-toerana sy ireo manam-pahefana AMERIKANA, na izany aza, amin'ny Ankapobeny, amin'ny maha-fihetsika fankasitrahana.
araka ny mety (.) telo"Iraisam-pirenena mpamily ny fahazoan-dalana ihany ny mpihazona-pirenena ao amin'ny fahazoan-dàlana dia omena noho ny fahazoana ity Fifanarahana, ny sasany kely indrindra takiana efa nihaona.
Iraisam-pirenena iray mpamily ny fahazoan-dalana mety hampiasaina afa-tsy ny Voan'ny ny antoko navoaka, izay fari-ny mpihazona manana ny ara-dalàna-ponenana sy izay namoaka pirenena fahazoan-dàlana na iray avy amin'ny antoko hafa-namoaka fahazoan-dalana mamily, izy no ekena any an-tsaha ity, dia tsy manan-kery."rehefa manan-kery eo amin'ny taniny, ny fiara avy ao amin'ny kilasy fa izay ny fahazoan-dalana hitondra fiara, nanome ny fahazoan-dàlana no mbola manan-kery sy ny hafa Arakaraka ny antoko na ny iray amin' ny zana-ny faritra, na ny Fikambanana efa namoaka, ny ity hafa Arakaraka ny antoko na ny iray amin 'ny zana-toerana no mahazo alalana"Ho an'ny Alemaina no nifehy ny famoahana ny Iraisam-pirenena ny fiara ny fahazoan-dàlana ao amin'ny fizarana faha-a sy ny fizarana b ny fiara ny fahazoan-dàlana lalàna (FeV). Mifanaraka amin'ny andininy faha-valo amby efapolo ny Fivoriambe. lehibe faha-II, p.), Paris Fivoriambe ho an'ny Repoblika federalin'i Alemaina afa-tsy ny momba ireo Milaza fa ny Fivoriambe tsy mbola antoko politika, toy ny ao Thailandy. Ny undersigned Plenipotentiaries ny governemanta ny Fanjakana izay voalaza eto ambany, avy amin'ny. Aprily, dia nivory tao Paris nandritra ny fihaonambe, mba handinika izay Fanitsiana ny Fivoriambe Iraisam-pirenena momba ny maotera ny fifamoivoizana. Oktobra, efa nanaiky ireo fepetra ireo. Ny fifanarahana dia avy Desambra ny taona mba ho manan-kery. Tao Parisy ny fifanarahana dia ho tantanana, fa ny Iraisam-pirenena mitondra fiara ny fahazoan-dalana ho amin'ny firenena rehetra ny Sonia fifanekena, dia manan-kery. Ny fahazoan-dàlana dia ataon ny roa ambin'ny folo volana izany ary tsy maintsy avoaka ao amin'ny famoahana ny firenena. Ny fiara ny fahazoan-dàlana saranga araka ny Vienne Fifanarahana momba ny lalana dia fifamoivoizana mifanitsy ireo ny vondrona EOROPEANA-mpamily ny fahazoan-dàlana: Ivelan'ny vondrona EOROPEANA, Mitondra iraisam-pirenena mpamily no nanolorana azy ho fahazoan-dalana amin ny fitsipika. Iraisam-pirenena, fahazoan-dalana mamily manana afa-tsy izay mitohy amin'ny firenena ny fiara ny fahazoan-dalana mba ho manan-kery.
Hanova ny anarana manaraka ireto ny fanafoanana ny fanambadiana - firaketana ny birao
Raha toa ianao te-hanaiky taorian'ny fanafoanana ny fanambadiana ny anarana nahaterahana, na ny anarana fianakaviana indray, mba hiresaka aminay amin'ny olonaFanamarinana dika mitovy avy ny fanambadiana, fisoratana anarana, na fanambadiana an-tsoratra, dia mila fanamarinana dika mitovy avy ny fanambadiana, fisoratana anarana, na fanambadiana an-tsoratra azy haharitra ny fanambadiana. Raha toa ianao ka manambady any ivelany, dia ilaina ny taratasy fanamarinana ny fanambadiana, raha ilaina, amin'ny Fandikan-teny ny fianianana Mpandika teny, raha ny fanambadiana no tsy nachbeurkundet ao alemaina Anarana. Porofo ny fanafoanana ny fanambadiana dia Manohy manome porofo momba ny fanafoanana ny fanambadiana, ohatra, ao ny Endrika ny fisaraham-panambadiana ny didim-panjakana tamin-kery ny lalàna Memorandum, na ny fahafatesana taratasy fanamarinana ny maty mpiara-miasa. Raha toa ny fandravana ny fanambadiana any ivelany ny zava-nitranga, sy ny porofo dia tsy voasoratra momba izany ao amin'ny teny anglisy, dia mila ihany koa ny Fandikan-teny alemana ny fianianana Mpandika teny. Eo ambanin'ny toe-javatra, dia tsy maintsy ho tanterahina ao ny raharaha ny avy any ivelany ny fisaraham-panambadiana ny fankatoavana paika mialoha Efa misy ny fanambarana Raha toa ianao ka efa nanao fanambarana ny anaran'ny mpitarika ao amin'ny fanambadiana sy ny taratasy fanamarinana ny efa nahazo, dia mangataka anao izahay, izany taratasy fanamarinana dia ho nanome. Ny sarany ho an'ny besinimaro ny taratasy fanamarinana sy ny notarization ny ambony anarana fanambarana amin'izao fotoana izao dimy amby roa-polo EUR Manampy izany ny saran'ny taratasy fanamarinana ny nanova anarana sy na ny taratasy fanamarinana ny fanovana ny anarany eo amin'ny habetsaky ny folo EUR. Ny fanazavana dia tsy maintsy niditra tany amin'ny firaketana ny fanambadiana ao amin'ny rejisitry ny birao ny fanambadiana toerana, noho izay mety ho mahomby. Avy tany, dia avy eo mandray ny fanadihadiana famantarana mahamarina ny vaovao no anarany Raha toa ka nisy fifanarahana tany ivelany, ny fanambadiana, attesting ny fonenana firaketana birao ny fahombiazan'ny ny Fanambarana ny fanovana anarana.
Trosa famoriam-bola sampan-draharaha ao amin'ny Bremen
Mifandraisa aminay Ara-potoana fanodinana ny trosa fanangonana ny filaminana, dia ho antsika ny resaka mazava ho azy Isika haha ara-dalàna antsika avy hatrany amin'ny raharaha ny defaulting mpanjifa, ary manome ny amin'izao fotoana izao ny fepetra takiana amin'ny fe-potoana FaranyMandritra izany fotoana izany amin'ny alalan'ny Fikarohana an-Tserasera ny Maso, mba hahazo aloha ny vaovao momba ny Olona sy ny bola ampy ny mpitrosa. Mizara ny fomba ny misokatra receivables ho an'ny manam-pahaizana manokana ny trosa famoriam-bola fahafahana Misafidy in Bremen, na ny avy-of-ny fitsarana ara-pitsarana sy ny fanangonana ny receivables, ary koa ny fanaraha-Maso ny tondrozotra.
Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra nanorim-ponenana ao amin'ny mialoha-pitsarana trosa ny famoriam-bola ny fomba sy miantoka anao ny optimum dia midika hoe miverina. Eto, ny tsara fampandehanana ny raharaham-barotra fifandraisana amin'ny mpiara-mpitrosa dia foana ny eo anoloana, tsy te-ho very toy ny mpanjifa Mazava ho azy, dia miasa ho toy ny trosa famoriam-bola, ny filazana ireo orinasa ao amin'ny sehatra tsy miankina, ohatra, ny raharaha receivables avy Amintsika indrindra amin'ireo izay meloka taminay ny tricks no fantatra mba hialàna amin'ny fepetra ao amin'ny fitsipika, izahay fa fitaovana mahomby.
mety ho manan-danja daty ho anao satria, araka ny § -ny zavatra an-trano fehezan-dalàna ho faty avy amin'ny taona ny lany ny ny Kalandrie taona.
Izay tokony hatao aorian'ny lozam-piarakodia. Lozam-pifamoivoizana
Fa ahoana no hamalianao ny lozam-pifamoivoizana tsara
Amin'ny ankapobeny, tsara nytapitrisa lozam-pifamoivoizana voasoratra ara-panjakana ny polisy manampahefana ao amin'ny taona manerana ny firenena. Ny ankamaroan'izy ireo dia tapitra ny eto, soa ihany fa afa-tsy ny simba fananana. Fa, rehefa avy rehetra, maherin'ny. Mandritra izany fotoana izany, ny Antontan'isa milaza Ny birao Federaly ho an'ny taona, dia ny hampitombo bebe kokoa eo amin'ny Isa ny lalana maty mialoha: Momba ny fahafatesana no andrasana - roa bebe kokoa noho ny tamin'ny taon-dasa. Ny lehibe indrindra mety ho vondrona dia mbola ny mpamily ny mpandeha Fiara. Nefa ihany koa ny Bisikileta sy môtô mpitaingina hianjera matetika na mandray anjara amin'ny loza. Avy ireo antontan'isa angona iray vokatry indrindra: mety ho na iza na Iza ary ny olona rehetra dia tokony ho vonona ho ratsy indrindra. Rehefa mety ianao ho tsy fahombiazana mba hanampy ireo voampanga. Inona no mba handinika ny raharaha ny tsy ampy taona ny simba fananana. Ireo sy fanontaniana hafa dia ho eo ity mpanolotsaina vavahadin-tserasera momba ny lohahevitra:"loza"no hazavaina amin'ny an-tsipiriany. Ny fomba marina ny hanao araka ny loza lehibe mety hamonjy ny ainy. Saingy tsy mitsaha-mitombo, izany dia fiara mpamily fotsiny ny loza nitranga - ny iray avy amin-tahotra, ny hafa avy ny tsy firaharahiana.
Fa inona no hevitra mba fanamarihana
Ny Antony dia tsy ilaina: Afaka manam-bola ny unsecured loza-toerana, tsy misy fanampiana, misakana ny famonjena ny filaminana eo amin'ny asany na ny"Gaffer", tsy maintsy manantena henjana ny sazy. Tsy maintsy raisina mivantana tamin'ny lozam-piarakodia, ianao dia tsy maintsy manome fanampiana. Na izany aza, izany dia tsy eo ambanin'ny toe-javatra rehetra. Izy ireo dia hitondra ny tenany amin'ny alalan'ny ny Zavatra nataony, na ny amin'ny loza, dia tsy mila ny hiditra an-tsehatra eo amin'ny asa. Ny manokana ny fiainana sy ny fiarovana hatrany haka ny laharam-pahamehana. Na izany aza, na dia ao amin'izany tranga izany, ianao dia tsy maintsy farafaharatsiny hanairana ny famonjena ny filaminana. Ny toerana nitrangan'ny loza dia mora ho anareo, na izany aza, tsy misy atahorana, tsy tokony hanao sy ny antoko mandray anjara amin'ny loza. Ny fampitandremana telozoro dia tsy maintsy ho araka ny fifamoivoizana toe-javatra lavitra ampy manoloana ny loza amin'ny alalan'ny fanarahana ny fifamoivoizana - mba hapetraka ny hafa ny fitaterana mpandray anjara amin'ny fomba ara-potoana mba manaraka ny fifamoivoizana sakana: Maro Ny olona toy izany indrindra indrindra fa milamin-tsaina sy matahotra ny hanao zavatra tsy mety. Na izany aza, indrindra ny tokony ho tena mahafantatra tsara ity: Manao tsy misy fanampiana Voalohany, tsy afaka hanao izany dia araka ny § c ny heloka bevava (StGB) ny tsy fahombiazana mba hanome fanampiana dia meloka: Izay mandoa raha toa ny loza, na fahita-doza na Mila fanampiana, na dia izany aza dia mendrika ny ho mitaky azy, ao amin'ny toe-javatra tsy misaina, indrindra fa ny tsy manan-danja ny mety sy ny tsy fanitsakitsahana ny manan-danja hafa ny adidy dia azo atao, amin'ny fampidirana am-ponja hatramin'ny taona iray na amin'ny vola ho faty. Izany, noho izany, amin'ny ankapobeny dia azo atao ny manome fanampiana, ianao koa dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny lalàna mba hanao izany. Ny tahotra ny manao zavatra tsy mety, dia tsy hamarinina amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, na izany aza. Ny Antoko politika dia tokony hiezaka ny resuscitation na fanampiana hafa soa, ny ratsy, mandrahona azy ireo ao amin'ny fitsipika, ary tsy misy sazy. Izany no azo atao ihany, raha tsy fitandremana dia nampiseho ao amin'ny Asa azo. Nefa tsy izany no matetika ny raharaha. Ary amin'ny farany, indrindra ireo mba ho voaaro, ny fitokisana, mba hanome fanampiana Voalohany. Koa no atao ihany koa ny Mahay, raha tsy izany ihany no tsy vitsy ny olona afaka mahita fa tena manam-bola raha misy ny fahavoazana, ny fanampiana. Isaky ny mpihazona ny fahazoan-dàlana dia tsy maintsy, mba hahazoana ny fahazoan-dalana, ny fanampiana Voalohany mazava ho azy. ADAC sy ny alemà vokovoko Mena, na izany aza, jereo matetika ny zava-misy fa tsy manam-paharoa io mazava tsara dia matetika kely ihany. Mba ho afaka amin'ny toe-javatra saina sy ny loza ny toe-javatra tena ahitana araka ny tokony ho izy sy manao zavatra haingana, misy ny mila ho tapaka ny fampahatsiahivana ny Lesona. Ny Fanatanjahan-tena bebe kokoa ho an'ny tranga vonjy taitra, ny fiandrianany mihetsika ny vahoaka. Tsy maintsy mieritreritra ny ho ela ny momba ny dingana tsirairay, fa miantso ny olo-mahay ny Fahalalana.
Isaky ny mpamily dia noho izany soso-kevitra izany amin'ny tsy tapaka intervals fampahatsiahivana taranja mahefa ny asa.
Raha toy ny voalohany aider teo amin'ny toerana nitrangan'ny loza, afaka manaraka raha ny tsy fahazoana antoka, na izany aza, hatrany amin'ny Voalohany-hanampy guide raha ny raharaha vonjy taitra. Isaky ny fiara dia tsy maintsy hanampy, fara fahakeliny, ny Voalohany box ilaina Fikambanana sy vondrona fanampiny fitaovana. Izany dia ahitana ihany koa ny mafana bodofotsy, fonon-tanana, ny hety ary ny Voalohany-hanampy karatra, ny ilaina ny famohana sy tetika voatanisa ary nanazava. Ny mpamonjy voina tonga teny an-toerana, tsy mety handray ny zava-drehetra - dia ihany koa ny fikarakarana ireo naratra. Mety mila mitandrina mbola ho vavolombelona nanatri-maso.
Amin'ny maha-tompon'andraikitra nahatonga ny loza ianao, na inona na inona ny voalaza etsy ambony ny vondrona fanampiny andraikitra - andraikitra hafa.
Noho izany antony izany, ny Mitoetra ao amin'ny toerana nitrangan'ny loza.
Tsy nahazoan-dalana ny Fanesorana ny zava-niseho ny loza - hira-ary-mihazakazaka - mitaona ny ho faty.
Rehefa dia ny Handao ny loza amin'ny maha-hira-ary-mihazakazaka. Afaka ny fahavoazana kely koa ho tanteraka voasazy.
Ny antoko politika tafiditra amin'ny loza, taorian'ny loza tamin'ny lalana fitaterana avy amin'ny toerana nitrangan'ny loza, alohan'ny izy dia loza anjara na iza na iza minia na negligently hanimba ny raharaha.
Variana, ohatra, ny mpandeha, ny mpamily na ny azy, naka ny Kodiarana, dia toy izany koa izy, dia heverina ho toy ny antoko politika tafiditra amin'ny loza, ary tsy maintsy mijanona eo amin'ny toerana ihany: ny antoko mandray anjara amin'ny loza rehetra, izay fitondran-tena mety efa nandray anjara araka ny toe-javatra nahatonga ny loza.
(§, andinin-tsoratra dimy momba ny heloka bevava) Fa tsy tsirambina ratra ara-batana na vono olona tamin'ny lozam-piarakodia afaka ireo fepetra henjana.
Na izany aza, tsy nahazoan-dalana ny Fanesorana afaka manovo avy amin'ny toerana nitrangan'ny loza, sazy, raha toa ka tsy misy afa-tsy ny tokony fahavoazana kely.
Azo antoka fa ho faty ho an'ny hira-ary-mihazakazaka dia ekena noho ny fahavoazana kely mba fananana ao amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra ambany, fa tsy tena amin'ny 'tsimatimanota', ny kely indrindra avy amin izany, na raha toa izany ihany ny rangotra, ratra kely ao amin'ny loko. Ny hira-ary-mihazakazaka foana ny heloka fanalam-baraka. Koa, izay nahatsikaritra ny loza, dia mety ho jerentsika ny seho noho ny hira-ary-mihazakazaka. No voarakitra ho amin'ny Mpandalo-by momba ny isa lovia, rehefa nitondra fiara nivoaka ny fiara mikasika ny format sy mora, izany dia afaka mampahafantatra ny polisy momba izany. Mety hanajanona ny fanenjehana, na izany aza, raha toa ianao ka tsy afaka manamarina ny amin'ny porofo fa izy ireo nahita ny loza, raha ny marina. Na izany aza, manokana mitandrina mihatra eto: afaka Mampiasa izany ho toy ny filazana tsotra, mba tsy ho faty, dia afaka amin'ny fitsarana, raha ilaina, amin'ny manam-pahaizana momba ny hevi-mba hamaritana ireo na tsia ny filazana ny Toe-javatra ankehitriny, raha ny marina, na inona na inona no efa. Ny fitakiana ny fanasaziana ho faty tsy nahy hira-ary-mihazakazaka amin'ny ankapobeny dia tsy ho natahotra. Ao ny raharaha ny sazy noho ny tsy nahazoan-dalana ny Fanesorana amin'ny toerana nitrangan'ny loza ihany koa ao ny raharaha ny Filazana ny Varotra tanteraka aza raha toa ka tsy misy afa-tsy ampy taona ny simba fananana. Noho izany antony izany, na izany aza, misy tsy mazava tsara ny fitsipika. Amin'ny raharaha ara-pitsarana, indrindra ny mpitsara fanapahan-kevitra mifototra amin'ny ny olona toe-javatra, ny famerenana ny tsirairay avy ny toe-javatra. Ny hira-ary-mihazakazaka tsy afaka koa hisintona amin'ny toe-javatra toy izany, ny sazy ara-bola na sazy, raha toa ka nanatanteraka ny loza, nihaona tamin'ny fomba ara-potoana ny adidy mba hanome fanazavana. Taty aoriana, izany no azo atao. Na izany aza, nanome fotoana voafetra. Ary afa-tsy ao amin'ny toe-javatra miavaka mety ho nanofahofa avy ny fanenjehana. Taorian'ny loza fanaintainana sy ny fijaliana filazana avy amin'ny naratra tonta matetika. Ny olona ara-batana mandratra, tsy manana izany ihany koa.
Amin'ny Ankapobeny, afaka mijoro noho ny fanambarana ny fiantohana.
Tsy maintsy nandao ny loza, na izany aza, raha tsy misy ny fahazoan-dalana, dia hesorina aminy ny fiantohana ny fiarovana amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra. Fa: Afa-tsy ny raharaha efa feno tanteraka ny fiantohana, ny fahasimbana dia hafindra any ny fiara. Ny Anisan'ny hull eo amin'izany tranga izany, matetika, afa-tsy ny fitaratra fahavoazana. Na izany aza, ny fiantohana dia afaka mandeha ny policyholders amin'ny fanonerana sy ny vola hatramin'ny. euros indray Ianao dia tsy maintsy mandoa ny vola ankapobeny feno vola ny tenany ihany. Ny fanambarana dia mifanaraka amin'ny vorzuwerfe ny hetsika manan-danja, ary ny Hamafin'ny ratra. Tsirambina ny ratra eo amin'ny lalana fifamoivoizana dia ny mba hahazoana manavaka avy amin'ny wanton ratra ara-batana (§ StGB). Amin'ny farany, ny olona meloka dia tsy maintsy ho voaporofo fa izany no mikendry ny ara-batana tsy fivadihan'ireo ny niharam-boina, mazava ny fikasany. Efa nanolo-tena amin'ny loza ao sasatra ny fifamoivoizana (ohatra: Parking) ny mpamily no afa-mandositra, ny ora ny fitsipika manan-kery. Nanome, na izany aza, fa ao ny raharaha ny lozam-piarakodia, afa-tsy kely fahavoazana ara-nofo no nahatonga izany. Ity fanapaha-kevitra ity (andininy faha, andinin-tsoratra telo momba ny heloka bevava) dia mamaritra fa ny raharaha ny sazy noho ny tsy nahazoan-dalana ny Fanesorana na tanteraka tratran'ny mety ho attenuated rehefa ny mpanao ratsy tatitra ao anatin'ny efatra amby roapolo ora aorian'ny fanaovana tsinontsinona ny mahay ny polisy manam-pahefana ary ny zava-nitranga ity miaiky, na ny tapa-kevitra manaraka ny Naratra antoko. Ny mombamomba ny mpamily tahirin-kevitra dia, na izany aza, tsy maintsy atao. Na inona na inona ny fangataham-bonjy milaza ny Naratra antoko mbola azo atao. Amin'ity tranga ity, dia afaka manantena, na izany aza, fa ny madio ny fiantohana nitoetra ny filazana. Ny santionany fe-potoana, maro ny fitaterana, ho saziana noho ny fandikan-dalàna be mafy kokoa noho ny rehefa ny expiry izany roa taona fanaraha-maso ny dingana. Ireo antony mahatonga ny santionany fotoana izany ny amin'ny loza sy ny handao ny sehatra tsy nahazoan-dalana, dia mety ho tsy mahazo mitondra fiara ny fahazoan-dàlana. Na izany aza, izany dia miantraika ihany koa ny hafa rehetra ny mpamily, izay ny loza dia omena tsiny. Ho an'ny tsy ampy taona ny loza, afa-tsy amin'ny fampiharana ny lalana amin'ny ankapobeny dia mba aoka ny fandraràna ataon'ny manampahefana. Ankoatry ny famaizana momba ny heloka bevava an'ny beginners mila jerentsika ny lamandy na sazy, ny fandikan-dalàna ao amin'ny fe-potoana fizahan-toetra. Ity farany, ny fandraisana anjara amin'ny fiofanana seminera. Ny zava-dehibe indrindra ny vaovao momba ny marina fomba raha ny lozam-piarakodia, no namintina ho anao amin'ny mora ampiasaina mpitari-dalana. Ankoatra ny zava-misy eo amin'ny foto-kevitra ny fanampiana Voalohany sy hira-ary-nandositra, dia tafiditra ihany koa ny endriky ny loza tatitra. Noho ny loza ao amin'ny lexicon, dia nandray koa tsotra sady fohy ny famaritana ny teny manodidina ny foto-kevitry ny loza. Ny mpitari-dalana ao amin'ny fonon efitra, ianao vonona ao ny zava-nitranga ny loza, eny, na dia manantena izahay fa mazava ho azy fa mila maka izany fanampiana na oviana na oviana.
Real estate findramam-bola-fampitahana: Best zanabola ho anao manokana an-trano VERIVOX
Isaky ny hamaly mampihena ny sisa ny trosa
Izay nofy ny manokana rindrina efatra, dia mila ny tena toetrany findramam-bolaAmin'ny Verivox mpanao trano sy ny an-trano ny mpividy dia afaka manao kajy ny fahalianana sy mangataka ny tsy maintsy quote. Ny saran-dalana, manam-pahaizana mahita ho anareo avy amin'ny an-jatony ny banky sy ny tahiry ny banky, ny isam-batan'olona, indrindra ny mahasoa ny tena toetrany ny fampindramam-bola sy manolotra toro-hevitra na amin'ny alalan'ny antso an-tariby sy ny eo an-toerana. Ny real estate bola dia matetika no nahazo toy ny tany fiampangana na ny antoka antoka andian-bola.
Ny banky mampisambo-bola ihany no manohitra ny fiarovana
Ny fanao isan-taona dia ny tahan'ny mahaliana dia mifamatotra mafy nandritra ny taona maro (efa voasoratra), izany hoe, izy no tsy miova. Ao ny raharaha ny annuity fampindramam-bola, ny isam-bolana na isan-taona Rate (ny annuity) dia ahitana ny fahalianana sy ny lehibe. Ny Taha tsy miova ny fe-potoana raikitra ny Zanabola dia tsy tapaka. Vokatr'izany, ny mahaliana ny ampahany amin ny manaraka ny Tahan'ny sy ny ohatry ny hamaly midina. Zanabola hidin-trano-tany, dia mifarana, ny fanaraha-maso ny famatsiam-bola ho an'ny ny sisa ny trosa vaovao mikendry tombontsoa. Ny fiarovana ny Banky mahazo ny baiko, ny antony, ny trosa na antoka ny fananana. Ny antony trosa voatanisa ao amin'ny laharana voalohany ny toerana ao amin ny tany hisoratra anarana. Ny fiarovana bebe kokoa ny Banky dia ny zava-misy fa ny zavatra iray ihany no variana ka ny sasany trosa-ho-fetra ny lanjany. Izany hoe, arakaraka ny Banky enimpolo isan-jato ny fividianana vidin'ny. Ny Mpanao mila lehibe findramam-bola, arakaraky ny maha-lafo ny zanabola. Ny Sisa amin'ny vidiny sy ny fividianana ny vola lany dia matetika vola amin'ny alalan'ny hitsiny sy ny findramam-bola an-trano sy tahiry fifanarahana. Ny tsara indrindra dia, ny hitsiny dia tokony ho lany-ny roa-polo isan-jato ny vidin'ny fividianana ny fananana miampy misy sy ny mpitranga eo ny vola lany, izany hoe manodidina ny - isan-jato ny fitambaran'ny.
Na dia ho namatsy vola amin'ny olona iray ny toe-javatra, zato isan-jato ny fividianana vidin'ny.
Na izany aza, amin'ny tsirairay Euro nindramina, ny enta-mavesatra ara-bola ka noho izany ny mety, mba raiso ho eo ambanin'ny ny toe-javatra, ara-bola, dia eo ny hitsangana. Noho ny mety kokoa banky amin'ny ambany isaky ny hitsiny ary ny ambony ny zanabola mba fangatahana. Mifanohitra amin'izany, Euro rehetra mba handoavana ny tsy liana dia nahazo vola. Ambonin'ny zavatra rehetra, ny enta-mavesatra tsy maintsy apetraka eo amin'ny fivelomana ny tompony sy ny fianakaviany. Ohatrinona ny vola lany ny fananana, dia miankina amin'ny efa misy ny hitsiny. Eo amin'ny hafa, ny ambony indrindra sary nahazoan-dia voafetra ihany, izay isam-bolana ny Tahan'ny mety manam-bola ny mpanjifa. Ny teti-bola fanaovana kajy dia manampy ny mampitaha ny vola miditra miaraka amin'ny fandaniana, ary ny kajy isam-bolana ny Tahan'ny. Na iza na iza dia izay kosa dia misarika avy amin'ny Mietsverhältnis amin'ny ny fananany, dia tokony hitondra ao an-tsaina fa eo amin'ny lafiny iray ny hofan-trano dia foanana, fa vaovao avy ankoatra ny vola lany. Ny Hamaly fanaovana kajy dia ny kajy, ao amin'ny fototry ny isam-Tahan'ny sy ny tiana teny bola mety ho azo. Ny real estate fampindramam-bola, ny faharetan ny liana ny hidin-trano-ao no zava-dehibe ihany koa. Izany no hamaritra ny fe-potoana izay nifanarahana ny zanabola dia mihatra. Tamin'ny izany fotoana izany, izy no tsy miova, ny enta-mavesatra ho an'ny ny misambotra tsy miova.
Afa-tsy ny expiry ny nanaiky raikitra liana vanim-potoana dia ho renegotiated.
Ny vaovao zanabola dia ambony kokoa noho ny tany am-boalohany, dia afaka mahazo ny misambo-bola ambony enta-mavesatra, arakaraka ny fomba avo no sisa miavaka mizana ny trosa. Ny hany ka izany no nanolorana azy ho mandamina amin'ny dingana zanabola ambany, raha mbola araka izay azo atao raikitra ny Zanabola.
Ny tombony ny ela zanabola fixation: Rehefa afaka folo taona ny tsirairay real estate findramam-bola mety ho faranana tsy ho faty, ary ho rescheduled, na dia ny zanabola hidin-trano dia mbola mihazakazaka.
Ny tombontsoa tokony ho nandatsaka mandritra izany fotoana izany, mpanorina ny soa. Rehefa zanabola miakatra, ianao dia afaka hitandrina ny mora vidy-voafatotra zanabola. Ny zanabola hidin-trano tapitra, ianao dia afaka tanteraka ny misambotra fanaraha-amin'ny famatsiam-bola - na toy ny Rollover amin'ny Banky ihany, na trosa rescheduling amin'ny iray hafa. Amin'ireo tranga roa ireo, ny taona dia ho voampanga liana. Izany fahafahana afaka mampiasa ny mpanao trano mba hahita mora kokoa ny tolotra. Raha mbola ny zanabola dia raikitra, dia tsy maintsy mitoetra amin'ny famongorana ny tahan'ny tsy tapaka.
Ny mpanjifa te-handoa indray ny findramam-bola haingana, na dia eo ny vongan vola, iharan'ny misy prepayment ho faty.
Noho izany, dia mahasoa ny handamina manokana hamaly ny tsara, ary ampiasaina, ohatra, ny fidiram-bola ny hetra refund na kely Lova mba handoavana ny trosa haingana kokoa sy ny zanabola mba hamonjy. Ny real estate findramam-bola fampitahana tandremo mpanao trano, voalohany indrindra, ny mahomby isan-taona ny tahan'ny zanabola.
Izany dia ahitana tsy ny zanabola ihany koa fa na inona na inona Saram ary koa ny hamaly ponenana. Liana izany dia tsy ho incurred raha ny tena toetrany findramam-bola hofany iray vola, fa nandritra ny volana maromaro dia ho karama.
Ho an'ny sasany ny mpanao trano, izany hoe manana ny lanjany, ary noho izany, mba handoa manokana mba manolotra izay ahitana hatramin'ny roa ambin'ny folo famatsiana liana-maimaim-poana ny volana. Nisy fiovana ny toerana manodidina Ankehitriny fanavaozana famatsiam-bola amin'ny tsotra bola ny tahan'ny tsy amin'ny antony ny trosa order. Efa nahita ny tolotra amin'ny iray isan-taona ny ambany ny tahan'ny zanabola. Afaka manao kajy ny tahiry mety ho ao Euro.
Ny zo amin'ny lafiny ara-pianakaviana
Stefan Gamsjäger: ny marina amin'ny fanambadiana mba hanara-dia ny momba ny ny mahazatra ny Velona, amin ny Fahatokiana, ny fanampiana sy ny mendrika fihaonana. Stefan Gamsjäger dia angamba Ny fomba tsara indrindra ny fisarahana dia amicable ny fisaraham-panambadiana, izay ny ankamaroany dia notahin'i mazava tsara ny lalàna ao amin'ny teo aloha dia namarana ny fifanarahana ny fanambadiana. Ho an'ny sasany ny toe-javatra, ary koa ny fisaraham-panambadiana fifanarahana dia takiana Izany dia tsy maintsy farafaharatsiny misy ny fifanarahana eo amin'ny fizarana ny fananan'ny mpivady, ny mpivady tahiry, sy ny trosa, ny momba ny fiaraha-mientana ifampizarana milaza ny alimony ary, raha ilaina, ny Fampanoavana, mifandray zo sy fikolokoloana ny ankizyStefan Gamsjäger: ao ny zava-nitranga, ny faniriana, efa mialoha ny fanambadiana, ny vokatry ny fanambadiana, azo atao ny fisaraham-panambadiana na ny fahafatesana ny vadiny mba hametraka amin'ny alalan'ny fifanekena, tsy mitsaha-mitombo.
Vokatr'izany, ny henjana hanaraka ny fitsipiky ny olona iray dia afaka Mila ahitsy sy ny ho avy-pitsarana, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, azo ialana.
Toy izany koa lalàna hafa mety ho ny foto-kevitry ny fisarahan'ny fananana na amin'ny alalan'ny fanambadiana an-trano nanao, izay dia tsy ho tafiditra amin'ny fizarana. Indrindra indrindra, fa ny lalàna dia tsy lavitra nifehy tsy fanambadiana no mandalo tokantrano maso ny tahan'ny, ary indrindra indrindra fa amin'ny famaranana ny fiaraha-miasa fifanarahana. Stefan Gamsjäger: Ao amin'ny raharaha iray nanohitra ny fisaraham-panambadiana, na ny mikasika ny fisaraham-panambadiana mifototra amin'ny tsiny, noho ny fandravana ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana na noho ny antony hafa. Eto ny mpitsara amin'ny fisaraham-panambadiana didim-panjakana manapa-kevitra ary matetika ny fisaraham-panambadiana, ny fanambadiana, ny nilaina ny fandaminana ny vola holaniana, ny lalàna ny zanaka am-Ponja sy ny fikojakojana ny filazana dia tsy maintsy atao ao misaraka amin'ny fitsarana ny fitsarana. Ireo ny fomba fiasa dia be lafo kokoa sy mavesatra ho an'ny antoko rehetra Anjara Stefan Gamsjäger: Voalohany, ny fitànana am-Ponja na ny ray aman-dreny dia mijanona amin ny fitsipika, ny ampahany noho ny mahazatra ny ankizy tsy ampy taona ho foana, ny olona iray izay ny ankizy dia tsy manatrika eo ny vokany, indrindra indrindra, dia tsy maintsy handoa fanohanana ny ankizy. Tsy afaka ny ray aman-dreny no miombon-kevitra amin'ny Vonjimaika fa ny fitsarana dia manapa-kevitra momba ny fototry ny zaza-panahy.
Ny fahazoan-dalana sy ny fisoratana anarana ny fandoavam-bola ny tolotra FMA - tsena ara-bola ny fahefan Aotrisy
Fandoavam-bola ny andrim-panjakana dia tsy maintsy manaraka hentitra ny didy amam-pitsipika fepetra takiana
Ireo mifandray, ohatra, ny fepetra takiana ho an'ny ny vola na mety ny fitantanana, ny Tale fepetra takina sy ny tatitra.
Ireo no nosoritan'ny momba ny fepetra ara-bola ny andrim-panjakana.
Eto ianao dia mahita ireo vaovao izay mifanaraka amin'ny mari-pankasitrahana ny fahazoan-dalana ho an'ny fandoavam-bola andrim-panjakana sy ny fandoavam-bola firosoana mpanome tolotra sy ny fisoratana anarana amin'ny kaonty vaovao mpanome tolotra.
Ny fanomezana noho ny Aotrisy-bola andrim-panjakana sy ny fandoavam-bola firosoana tolotra dia omena amin'ny tsena ara-bola ny fanaraha-maso ny fahefana. Ny fisoratana anarana amin'ny kaonty vaovao mpanome tolotra koa ho atao amin'ny tsena ara-bola ny fanaraha-maso ny fahefana. Ny fangatahana dia tsy maintsy ahitana ny sasany Antsipirihany fa ao amin'ny. Ny tena tapa-ny ZaDiG taona. Ny tsena ara-bola ny fanaraha-maso ny fahefana ihany koa dia manan-jo ny fanomezana latsaky ny sasany Fepetra takiana mba hiala (§ iraika ambin'ny folo ZaDiG taona) sy ny Vola (§ roa ambin'ny folo ZaDiG taona). Ny tsena ara-bola ny fanaraha-maso ny fahefana izay manolotra ny mety ny Fanomezana ny fisoratana anarana amin'ny kaonty vaovao mpanome tolotra. Ao amin'ny tsena ara-bola ny fanaraha-maso, ny fanaraha-maso ny fandoavam-bola ny andrim-panjakana, ny fandoavam-bola firosoana mpanome tolotra sy ny kaonty vaovao mpanome tolotra, dia toy izany ny manome ny fanomezana na ny fisoratana anarana sy ny fizotry ny fanaraha-maso no misy ao amin'ny faritra ny fanaraha-maso ny banky ("fanaraha-maso ny banky, ny fandoavam-bola andrim-panjakana sy ny Petra-bola fiantohana).
Ny fivarotana ny fiara amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny MEGA Fanompoana fonosana
Noho Ny fiara-varotra isika no tsara indrindra Mpiara-miasa
Mihoatra ny iray Tapitrisa ny mpanjifa efa afaka mivarotra amin ny fifadian-kanina sy azo antoka ny Fanompoana ny fiaraTaorian'ny fanombanana manokana ny fiara ho ampiasaina amin'ny alalan'ny fiara ny manam-pahaizana, afaka mahita izay sale no mety ho Anao ny safidy sy Ny fiara tsara indrindra. Ny olona izay mametraka ny varotra fiarakodia no sanda amin'ny ankapobeny ny asa Fanompoana sy ny torohevitra tsara izay ao an-fiara araka ny tokony ho izy. Boky izao mety aterineto ny daty ny safidy ao amin'ny sampana ny safidy. Afaka mahita antsika amin'ny mihoatra ny ny toerana manerana an'i Alemaina. Tsy mbola manana ny fiara amidy dia mora. Taorian'ny fanombanana manokana ny fiara ho ampiasaina amin'ny alalan'ny fiara ny manam-pahaizana, afaka mahita izay sale no mety ho Anao ny safidy sy Ny fiara tsara indrindra. Ny olona izay mametraka ny varotra fiarakodia no sanda amin'ny ankapobeny ny asa Fanompoana sy ny torohevitra tsara izay ao an-fiara araka ny tokony ho izy. Boky conveniently an-tserasera ankehitriny ny daty ny safidy ao amin'ny sampana ny safidy.
Afaka mahita antsika amin'ny mihoatra ny ny toerana manerana an'i Alemaina.
Araka ny fanadihadiana avy ny taona, eo ho eo fitopolo isan-jato ny Alemà dia hivarotra ny fiara an-tserasera.
Noho izany, ny Aterineto no tena malaza amin'ny fiaingana ho an'ny tsy miankina ny fiara amidy.
Mandritra izany fotoana izany, ny isan-karazany ny Internet sehatra manokana amin'ny tsy miankina ny varotra fiarakodia no mitsaha-mitombo. Fa aiza ny loza sy ny fatiantoka ny fiara dia mivarotra ny alalan ny Internet. Ny fanadihadiana mazava tsara, dia Maro ny tsy miankina ny fiara mpivarotra ao amin'ny mpandeha fiara ny ahiahy fa misy zavatra mety tsy nety. ny fiara manome ny tonga lafatra fifanarahana rehefa tonga ny fahombiazana fiara amidy. Mba ho Anao ny mivarotra mora foana sy tsy manana ahiahy, dia manolotra Anareo feno fanompoana fonosana amin'ny aotra ny vidin'ny.
Tsara ny fiara maso, ary tsara ny mpanjifa, fikarakarana, ny fototry ny singa ireo.
Ny iray amin'ireo asa, ny vita rehetra ilaina ny fombafomba ankoatra ny marina fiara fanombanana. Ianao hivarotra Ny fiara-ny fiara, dia handray soa avy ny traikefa sy ny fahaiza-manao. Izahay dia aseho manerana an'i Alemaina sy amin'ny fotoana rehetra ho Anareo - na amin'ny alalan'ny E-Mail na telefaonina. Fotsiny boky mora foana amin'ny alalan'ny ny tranonkala ho an'ny fotoana ho an'ny fanaraha-maso ny fiara ao amin'ny fivarotana iray akaiky anao. Ny fiara manam-pahaizana, Tsy fohy ny fitsapana mitondra fiara ao anaty fiara. Ny manaraka ny fanombanana ny maka ny telo-polo minitra eo ho eo. Alemaina Mpamily isaky ny fito taona fiovana eo amin'ny fiara eo ho eo. Ny Fahazarana amin'ny fiara sale mety hitranga.
Mahomby fiara amidy dia misoroka, ohatra, ny iray ambany ny fitakiana ny nampiasa fiara-tsena: ny modely karazana dia tsy ao amin'ny fangatahana, ny Endriky ny fiara marika efa nijaly tato ho ato, na ny fiara Famolavolana dia tsy misy intsony ny zava-misy.
Na dia amin'ny karazana fiara loko mety ho antony mividy ny tsy fisian'ny antoko liana. Ny fiara dia ao amin'ny Matio mainty fa tsy glossy vy lacquered, tsy izany no nitranga, eo ambanin'ny toe-javatra sasany, ny amin'izao fotoana izao hanandrana. Maro ireo antony izay mety hisy fiantraikany eo ny lanjan ny nampiasa fiara. Ny tsena fanadihadiana noho izany dia sarotra, indrindra raha amin'ny maha-olona tsy ampy ny ilaina ny fahaizana. Te-hiaro Anao amin'ny fiara mba hivarotra afa-tsy Ny Faritra, lavo ankoatra izany, ny mety tsy mahazo tsara tarehy famarotana. Ny anton'izany dia noho ny eo ho eo sale price of ao ny firenena raha atao ny fampitahana, dia afaka miovaova. Ny antontan'isa Vavahadin-tserasera Statista nampiseho izany. Ao Regensburg, Würzburg sy Flensburg, ny ambony indrindra vidin'ny ho an'ny faharoa-tanana ho tratra, noho izany, ny fiara. Ny vahaolana ho an'ny ireo sy ny hafa koa mety ho zava-tsarotra, na izany aza, dia tena tsotra: ny olona Izay nivarotra fiara manokana, dia tsara kokoa ny mifidy professional fiara mpividy izay nisolo tena ny rehetra Federaly faritra Ampiasaina. Ankoatra izany, ny mety mpiara-miasa manolotra isan-karazany ny safidy ho an'ny sale ny fiara. Izany no mpamatsy efa hita, satria ny-ny fiara Tsy afaka mivarotra saika ny rehetra ny nampiasa fiara.
Ny lanjan'ny fiara tsirairay dia tapa-kevitra avy amintsika tsirairay.
Amin'ny maha-firenena naneho ny orinasa, dia manolotra Anareo ny tonga lafatra ny vahaolana ho an'ny fiara. Ny fiara amidy amin-ny fiara dia mora foana sy mahomby. Fa tsy be dia be ny adin-Tsaina, ary ny vidiny avo, dia manolotra Anareo feno Fanompoana fonosana. Raha toa ka nisafidy, ohatra, ny olona tsy miankina, dia te-hivarotra, ampio izahay toy ny Anao.
Tsy mbola manana ny fiara amidy dia mora
Tsy miankina sale manome Anao ny fahafahana tonga lafatra mba hitana feno fanaraha-maso ny fivarotana ary na dia izany aza ampahany lehibe amin'ny vola. Nandritra ny fiara fanombanana any amin'ny toeram-pivarotana dia efa nanangona rehetra manan-danja angon-drakitra miaraka ary professional sary ny fiara noforonina. Izany dia fampiasana ny matihanina amin'ny marketing ny fiara.
Farany, rehefa mahomby sale foana eo amin'ny fanolorana: ny an-tsipiriany sy manintona lisitra mampifoha liana.
Ny fampisehoana dia mifamadika, hampandre ny isan'ny mety mpividy.
Izany dia mety hitranga na oviana na oviana ny andro na alina, izay midika hoe lehibe ny ezaka.
Ireo antso isika, raiso ho Anao.
Ny mampiahiahy ny fangatahana dia nojerena ary afa-tsy matotra mpividy Anao. Ny sisa amin'ny fivarotana dingana maka fotoana izao ho an'ny tenanao: ny fitsapana mitondra fiara, price fifampiraharahana sy ny Ny famaranana ny fifanarahana. Manapa-kevitra, izay no hivarotra Ny fiara. Misy koa manararaotra ny tsy miankina amidy: Raha toa ka efa nandray mivantana ny fivarotana vidiny na asaovy avy amin'ny mpivarotra lavanty, manampy izany dia zava-dehibe ho an'ny fironana ny faniriana vidiny eny an-tsena ny fiara ho Anao.
Hianatra ny Zavakanto ankehitriny ny fiara sale mahafantatra sy maka ny fahafahana eo amin'ny fanatanterahantsika ny mombamomba azy.
Isika no tsara indrindra sale safidy eo amin'ny tsena."Te hanary ny fiara - fa ahoana."Io no fanontaniana iray isaky ny andro, tsy tambo isaina ny tompon'ny fiara. Misy ny sasany fomba hivarotra ny fiara: gazety dokam-barotra, ny namana, ny Olom-pantatra, ny fianakaviana, ny Bulletin Board ao amin'ny fivarotana lehibe, nampiasa fiara mpivarotra manodidina ny zorony, ny fiara fanondranana na varotra Fiara-ins rehefa mividy fiara vaovao.
Ireo rehetra ireo Sales fantsona iray lehibe tombon-dahiny: Dia afa-tsy mahatratra ny olona vitsivitsy.
Amin'ny Aterineto, ny lehibe dia tonga Nampiasa fiara tahiry fifanakalozana sy ny auto auction. An-tserasera dia afaka manolotra anao ny ela ny fiara maro mpihaino any Alemaina sy Eoropa. Miaraka amin'ny vahoaka ny lisitra, na ny nilaozan'ny fampisehoana Ianao dia afaka hahatratra ny isa ny isan'ny tsy miankina mpividy sy ny mpivarotra fiara. Raha mivarotra ny alalan ny dokambarotra ho an'ny fiara manokana, ny asa Fanompoana dia matetika maimaim-poana. Ny Olana ny voalaza etsy ambony fomba Fivarotana: ny Fomba ianao dia afaka manakana izay nivarotra ny nampiasa fiara-danja, na koa lafo ary izany dia tsy manala ny. Raha ny hery anaty fiara no zava-dehibe ny kajy izay mba hivarotra ny fiara.
Farany, te mba hahazo ny tsara indrindra ny teny sy ny toe-piainana ara-drariny ny vidiny noho Ny fiara, ary izany koa ho maimaim-poana.
Tsy fantatrao toy ny mpivarotra fomba lehibe mety mpividy na mpivarotra fiara. Manana zava-baovao miaraka ny fiara fanombanana sy ny fiara misy ny banga eo amin'ny hatrizao manjavozavo fiara buying tsena dia mikatona.
Ianao toy ny tompon'ny fiara momba izao - ny fiara, ny iray fanta-daza fiara mpividy, raha tsy misy ny sakana, hamaritra ny lanjan Ny fiara sy mivarotra Ny nampiasa fiara haingana sy soa aman-tsara.
Isika dia ny laharana voalohany nampiasa fiara fividianana tany Alemaina. Eo anatrehanao hividy fiara vaovao, dia Azonao atao ny fiara amidy. Noho izany, maro ireo fombafomba, toy ny Fiara de-fisoratana anarana, ny fanafoanana ny fiantohana fiara, ary betsaka, betsaka kokoa mba ho tonga Aminao. Nefa tsy miaraka amintsika. Isika hikarakara ny zava-drehetra izay mety homena any ny fivarotana ny safidy ny manam-pahaizana momba ny fanombanana nataon'ny manam-pahaizana momba ny fahariana ny azo antoka purchase fifanarahana, hatramin'ny sy anisan'izany ny fanafoanana Ny nampiasa fiara. Ny henjana ny fiainana manokana ny politika no miantoka Ny fiarovana. Ny alalan ny manokana ny fivarotana, isika no Safidy tsara indrindra. Amin'ny ezaka kely kokoa, izany dia na aiza na aiza azo atao mba hahatonga ny fivarotana tsirairay. Ankoatra izany, Ianao no tsy mety, satria tsy misy ny fivarotana, ny fanerena na ny fanenjehana noho ny heloka bevava. Raha toa ka manana Varotra mivantana ny vidiny ary izany no mbola manan-kery, Dia afaka manakana ny tsy miankina ny varotra mivantana amintsika mba hivarotra. Ny asa ny tsy miankina sale no entina ho Anareo ihany rehefa avy eo dia ho hitanao ny asa Fanompoana ho misy mpividy.
Inona no efa natao ho very.
Ny fihetseham-po sarobidy ny fiara mety manao kajy ny tsy misy.
Fa inona no mahazo fa ny nampiasa fiara, raha te-hivarotra izany na mila. Ny tanjona value fanombanana dia ho an'ny laika, dia tena tsy ho vita. Maro ireo miezaka, ny fanontaniana dia ny hoe"Inona ny fiara mendrika". ny valiny momba ny fikarohana toy izany koa ny fiara ho any amin'ny manan-danja ny nampiasa fiara ny vavahadin-tserasera, sy ny hafa namana na Olom-pantatra mba hanadihady. Ny tena fanantenana fomba auto fankasitrahana dia mba mangataka ny matihanina. Ankoatra izany dia mba maro be ny karama safidy, misy maimaim-poana ny fiara mpamakafaka, ka ny fiara. Ho azy lozam-piarakodia, ny fiara, ny fiantohana ny fahavoazana bebe kokoa mandrakotra, ny fiara amin'ny motera simba na antitra nampiasa fiara, dia manatanteraka amin'ny antsipiriany fiara maso sy eo anivon', ny tsara indrindra ny fivarotana ny sakany Anao ny safidy noho Ny fiara. Any Alemaina, mihoatra noho ny tapitrisa mponina. Araka ny antontan'isa avy amin'ny teny alemà Federaly maotera fitaterana fahefana.
tapitrisa alemà manana fiara ny fahazoan-dàlana amin'ny karatra endrika.
Fa dia efa ho roa amby efapolo ny olom-pirenena rehetra. Firy ny olona efa antitra fiara ny fahazoan-dalana avy amin'ny taratasy, dia tsy fantatra. Ao amin'ny Ny volana janoary nisy dimy amby efa-polo tapitrisa mpandeha fiara voasoratra anarana ao Alemaina ny lalana fifamoivoizana. Ny ankamaroan'izy ireo dia tany Avaratra Rhin-Westphalie. ny fiara olona sale manome safidy ho an'ny saika isaky ny fiara. Miaraka isika Dia afaka mahita ara-drariny ny fiara-purchase - tsara indrindra ny asa Fanompoana amin'ny aotra ny vidin'ny tafiditra. Ny mileage na ny toe-javatra nisy ny fiara tsy milalao andraikitra. Noho izany, ny hividy fiara ao amin'ny fanjakana Mecklenburg-Andrefana Pomerania vao ho mora ny hividy any Avaratra Rhin dia toy ny fiara-Westphalie dia ny Sampana iray manontolo Federaly faritra. Ary misy foana ireo vaovao. Amin'ny tanàna lehibe toa an'i Berlin, Hamburg, Munich, Stuttgart, Cologne, Düsseldorf na Dortmund afaka mahita amintsika tany amin'ny toerana maromaro. Ao amin'ny faritra ambanivohitra, izahay dia hita ho Anao manokana.
Ny tanjona dia ny hoe Ianao tsy mihoatra ny dimam-polo maily avy ny akaiky indrindra sampana dia esorina velona.
Ny Fanambadiana Ny Fisoratana Anarana
Ny fampakaram-bady Lanonana dia hatao amin'ny teny alemana
Faktiora sy ny fandoavam-bola dia ny fifandraisana ny olona ao amin'ny fandoavam-bola ny olana ao amin'ny MA enim - sampan-Draharahan'ny fitantanam-bolaazo atao, izay ny voalohany ny fanendrena dia efatra herinandro manomboka izao. Fa fohy ny fe-potoam-fotoana, dia mifandraisa aminay amin'ny alalan'ny finday ny birao. Te-hanambady any Vienne, dia afaka hifandray antsika ho fanendrena ny famandrihana, ary koa ny fomba ny fampiharana manokana, an-tsoratra na amin'ny alalan'ny antso an-tariby ny Wiener fangatahana-Tsoratry ny birao. milaza ny anarana feno izany, dia nangataka ny daty ny fampakaram-bady, ny firenena nahaterahany, zom-pirenena, toeram-ponenana ny adiresy sy ny sata ara-panambadiana. Ny fanambadiana napetraka tsy miankina amin'ny rejisitry ny biraon'ny fisoratana anarana amin'ny fanambadiana na inona na inona firaketana birao any Aotrisy. Avy amin'ny iray volana janoary, ny fametrahana ny fiaraha-miasa voasoratra anarana, ary mitovy taovam-pananahana avy amin'ny miditra ao amin'ny fanambadiana ihany koa ny hanokatra ny hafa taovam-pananahana. Ny olona niara-niasa efa nanambady samy hafa, afaka mandeha miara - maso ny fananganana ny mifanohitra hanaraka ny fandaharana, tsy mialoha ny didim-pitsarana famaranana ny fanafoanana ny fanambadiana, voasoratra ara-panjakana ny fiaraha-miasa ao amin'ny tsirairay ny ara-dalàna andrim-panjakana. Na izany aza, dia levona nijanona amin izany, dia efa misy nizara fifandraisana (fanambadiana na voasoratra ara-panjakana ny fiaraha-miasa). Dia iray amin'ireo fofombadiko na roa amin 'ny fofombadiny teny alemana dia tsy matanjaka, na dia ny iray na roa amin' ny voafofo ho vadin'olona dia any ivelany, please contact raha mila fanazavana fanampiny mikasika ny endrika fanambarana mba hamantarana ny fahaiza-manao fifanarahana amin'ny fanambadiana' ny birao, dia hisy ny sonia sy fankatoavana ilaina. Alohan'ny handeha ho any amin'ny fisoratana anarana ny fanambadiana, tokony ho fantatrao izay ny rejisitry ny birao, ny fampakaram-bady ny Lanonana dia hatao. Mialoha an-telefaonina fotoana famandrihana amin'ny voafidy fampakaram-bady firaketana birao dia tsy soso-kevitra raha tianao ny lisitra biraon'ny fisoratana anarana ny fanambadiana hanambady. Ny fisoratana anarana ny fanambadiana mihitsy, tsy mila ny fanendrena. Na izany aza, izany no nanolorana azy ho audition am-piandohana ny fanokafana ny Ora. Manana ny mety mba milaza ny fanambadiana, dia tsy misy na eo anatrehan ny vavolombelona roa. Ity ny Ny taona sy ny sary ofisialin'ny ID afaka hamantatra. Ankoatra izany, ny iray amin'ireo anatiny ho vavolombelona, na ireo vavolombelona, mba ho mazava tsara fa afaka ny ho afaka amin'ny jerena ny fampakaram-bady Lanonana ho vavolombelona. Ianao sy ny mpiasa an-trano ny voninahitra sy ny groomsmen noho izany dia tsy maintsy manana fahalalana ampy amin'ny teny alemana, raha tsy izany, dia sady mila ny fisoratana anarana ny fanambadiana ary koa ny fampakaram-Bady ny tenany, mety tsara ny fisian'ny mpandika teny, tsy maintsy ny fiteny izay ny Lanonana atao, mba hahatakatra ary tsy maintsy ho araka ny vatana na ny saina maha-mpanan-karena, ny fanajana ny Lanonana ity, ny vavolombelona. Te hitarika ho amin'ny fanambadiana manambady-anarana (mahazatra family name), dia tokony hampandre ny efa tamin'ny fotoana fisoratana anarana ny fanambadiana ny fanambadiana taratasy fanamarinana denominated any amin'ny anarana vaovao. Ianao foana ny fanambadiana sy ny fianakaviana anarana, ianao koa dia afaka manao tsy misy fetra rehefa ny fanambadiana miaraka sy amin'ny olona na oviana na firaketana ny birao any Aotrisy ity fanambarana ity. Ianao dia mandray - raha tianao - new fanambadiana taratasy fanamarinana. Ny lisitry ny birao Vienne, manao ny fanambadiana ny fotoam-pivavahana tao amin'ny rejisitry ny birao nanomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma, amin'ny Standesamt Wien-ao anaty Stadt fampakaram-bady ireo amin'ny sabotsy (maraina). milaza ny anarana feno izany, dia nangataka ny daty ny fampakaram-bady, ny firenena nahaterahany, zom-pirenena, toeram-ponenana ny adiresy sy ny sata ara-panambadiana.
Ianao no efa niasa, ary te Ny Mpiara-miasa teo aloha, ny mpiara-miasa teo aloha hiditra ao amin'ny fanambadiana, dia tokony ho ny fiaraha-miasa voasoratra anarana, kopia nahaterahana, ny fanambadiana taratasy fanamarinana, ny fahafatesana taratasy, ny fitsarana, na ny fanapahan-kevitra mikasika ny fisaraham-panambadiana, ny fanafoanana na ny Fanambarana ny nullity), na amin'ny sehatra iraisam-pirenena ofisialy na amin'ny Fandikan-teny ho amin'ny teny alemana nataon'ny fitsarana mpandika-teny natolotra ny fitsarana mpandika-teny.
Fa izany dia matetika tsy ilaina ary afa-tsy azo atao raha ny tena fonenana any Aotrisy.
Levitra handahatra fitarainana amin'ny raharaha heloka bevava. Ny antso ho fanoherana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana
Ihany rehefa afaka rehetra, ny lojika ny fitsarana mijoro
Ao ny zava-nitranga ny tsy fitovian-kevitra momba ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ny raharaha ny iray amin'ireo antoko foana ny mety hisian'ny ara-dalàna-fanamby ho amin'ny fanafoanana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ambaratonga voalohanyLevitra handahatra fitarainana ao amin'ny heloka bevava ny raharaha, dia mihevitra ao amin'ny lahatsoratra.
Ny iray amin'ireo fitsipika manan-danja ireo amin 'ny asan' ny fitsarana, araka izany, dia ny rariny.
Ny didim-pitsarana ny fitsarana dia tsy maintsy ho antonony sy tsara tarehy. Rehetra ny hevitra ao amin'ny heverina ho Toe-javatra izany ny mpitsara dia tsy maintsy mandinika tsara, manendry, ary hanangona azy ireo tao amin'ny iray tarika ny zava-misy rehetra.
Raha ny Olona raha ny marina, ny heloka bevava, ny mpitsara fanapahan-kevitra dia manolo-tena, avy eo.
Fa hitranga indraindray fahafahan-jaza in afaka maka ny toerana, ary ny 'vidiana' ny fifandraisana amin'ny tanjona 'zavamaniry' ny tsy manan-tsiny. Ny nanameloka amin'ny toe-javatra ireo, dia miady hatramin'ny farany. Ny Fahafahana mba hamerina indray ny fahamarinana sy manao fitarainana. Ny akanjo dia tao amin'ny fitsarana ambony ny ohatra.
Ahoana no asa ny fitarainana amin'ny fotoana.
Avy hatrany rehefa avy ny didim-pitsarana, ny mpisolo vava, ny endrika, ny fandraisana anjara amin'ny dingana, na vaovao mpisolovava, tsy niasa, amin'ny tranga manokana, ny Lahatsoratry ny fitarainana.
Foana ny santionany, ny very antoko
Hanoratanao mba hampitombo ny vintana ny fahafaham-po ny fitarainana ao amin'ny Soratra araka izay azo atao, ny zava-dehibe rehetra ny zava-mitranga ao amin'ny zavatra sy manome ny lahatsoratra momba ny heloka bevava ao amin'ny Federasiona rosiana, dia sahiran-tsaina, na tsy ara-dalàna ao amin'ny voalohany vahaolana. Taorian'ny panangonana ny lahatsoratry ny fitarainana, ny mpanjifa na ny solontenan'ny mandoa any amin'ny Banky Ny vola lany amin'ny fitsarana momba ny raharaha lalàna sy ny fanjakana saran'ny. Ny fitarainana sy ny Fampiharana rehetra, dia eo amin'ny dika mitovy. Ireo vola miditra dia iharan'ny ny fandoavana ny saram. Ity tahirin-kevitra ity dia manana manokana, ara-dalàna neken'ny Endrika.
Ny fitsarana manaiky ny fitarainana noho ny fiheverana afa-tsy raha toa ny Endriky ny famenoana ny fitarainana nanamafy.
Noho izany, araka ny andininy faha. ny fehezan-dalàna momba ny paika ady heloka bevava ao amin'ny Federasiona rosiana, ny firafitry ny fitarainana dia ahitana ireto singa manaraka ireto: - fampahalalana momba ny olom-pirenena izay hetsi-Panoherana ao amin'ny fitsarana, dia zava-dehibe ihany koa ny manome ny ambaratongam-ny fandraisana anjara ao amin'ny fifanarahana (ohatra, Ivanov Ivan IVANOVICH - doza, ny niharam-boina, ny mpisolovava ireo voampanga olona sy ny t. d) - ho azo antoka ny tahirin-kevitra mikasika ny fanapahan-kevitra izay no fanamby amin'ny (anaran ny fitsarana, ny vahaolana ny daty ny fitsarana) - ny fanamarinana ny fitarainana (azo tsapain-tànana ny zava-misy mba hanaporofoana ny fahatsapana ho meloka na tsy manan-tsiny amin'ireo mpiaro ny santionany dia azafady fitarainana momba ny heloka bevava ny raharaha, dia diniho misaraka) - nanaiky ny lisitry ny fanampiny antontan-taratasy mifatotra ny fitarainana (dika mitovy ny misy tahirin-kevitra, ny vokatry ny Fanadinana, fanangonan-tsonia, fananana, sns.) - ny Olona, fitarainana, voatery ny fanaovan-tsonia, raha tsy misy ny tahirin-kevitra dia tsy manan-kery. Ny fitsarana ambony hanoherana ny didim-pitsarana ny fitsarana, araka ny andininy faha. fehezan-dalàna momba ny paika ady heloka bevava, ao anatin'ny voalaza ny fotoana voafetra ny fanekena ny Fitsipika. Ny zava-misy fa amin'ny Ankapobeny ny fomba fanao ara-dalàna, na inona na inona toetry ny raharaham-barotra, dia ny andro ny fe-potoana ny hanohitra ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Izany no zava-dehibe ny fiheverana fa dia manan-kery mandritra ny folo andro, ny soso-kevitr'izy ny asa-maimaim-poana ny andro. Nanaiky ilay didim-pitsarana ny fitsarana, aseho amin'ny. Antso manohitra izany ny fitsarana dia azo atao raha tsy aorian'ny. Aogositra (rehetra) Izany hoe, ny asa dia amin'ny fomba hentitra voafaritra famerana ny vanim-potoana. Izany dia ny Mety ny fanitarana ny fe-potoana ny hanohitra ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Mba hanaovana izany, dia mila manaporofo fa tsy misy antony tsara, mety tsy hahaliana ao anatin'ny fotoana voafetra lasa.
Ohatra, ny Olona iray ao amin'ny hôpitaly na ao amin'ny raharaham-barotra ny diany. Araka ny fitsipiky ny kanto ny olona, ny fe-potoana fampakarana fitsarana, dia mety ho nomena fotoana fanampiny ny fanomanana ny filazana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana araka ny lalàna Federaly, ny fitsarana, noho ny antony Badge fe-potoana.
Mieritreritra aho fa ny famerana ny fe-potoana farany, hita ho an'ny antso ho an'ny tanjona tsara (tena tokony hamaritana ny antony ny Firesahana). Ny fanambarana ny tokotokony sample. Fa ny fahombiazana amin'ny fanadinana, dia mila milaza amin'ny antsipiriany betsaka araka izay azo atao ny antony. Ny dingana ho sarotra ny taratasy fanamarinana ny fitsarana ny tsirairay ohatra dia ny nentim-paharazana-javatra amin'ny fomba fanao ara-dalàna. Ny zo amin'ny hetsi-panoherana unmotivated manohitra ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana dia ampahany rehetra ny antoko eo anoloan'ny fitsarana. Hahaliana ny didim-pitsarana, izay, ao ny hevitrao, rariny, ny voampanga sy ny mpisolo vava, ny havany ny voaheloka ny olona. Etsy ankilany, matetika miaraka amin'ny didim-pitsarana ny fitsarana, ny Mpampanoa lalàna dia tsy miombon-kevitra. Izy ihany koa ny toetry ny Mpampanoa lalàna afaka Hametraka fitarainana. Nanao fizahana izahay, araka izany dia antso iray ho fanoherana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Manantena izahay fa ny vaovao no manampy.
Ny Fiarovana Ara-Dalàna